Xoghayaha arrimaha dibada dalka Maraykanka John Kerry oo kulan la yeeshay wasiirada arrimaha dibada wadamada Bariga Afrika - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeWorldXoghayaha arrimaha dibada dalka Maraykanka John Kerry oo kulan la yeeshay wasiirada arrimaha dibada wadamada Bariga Afrika
August 22, 2016 Abdirahman Abdullahi Sheikh World 0
Xoghayaha arrimaha dibada dalka Maraykanka John Kerry oo kulan la yeeshay wasiirada arrimaha dibada wadamada Bariga Afrika.
Nairobi-(Puntland Mirror) Xoghayaha arrimaha dibada dalka Maraykanka John Kerry ayaa maanta oo Isniin ah magaalada Nairobi kula kulmay wasiirada arrimaha dibada ee wadamada Bariga Afrika.
Kulanka ayaa looga hadlay sidii loosoo afjari lahaa xiisadaha dagaal ee ka jira dalka Koonfurta Suudaan.
Waxaa kulanka ka qaybgalay wasiirada arrimaha dibada ee wadamada Kenya, Koonfurta Suudaan, Sudan, Soomaaliya iyo Uganda.
John Kerry oo ka hadlayay Nairobi, kadib markii uu la kulmay wasiirada arrimaha dibada ee wadamada Bariga Afrika ayaa ugu baaqay dalka Koonfurta Suudaan inay oggolaato in la geeyo ciidamo afar kun ah oo xoogan oo ka socda Qaramada Midoobay.
Xoghayaha arrimaha dibada Maraykanka ayaa booqasho ku maraya wadamada Afrika ayaa la filayaa inuu booqdo dalka Nigeria.
Garoowe-(Puntland Mirror) Madaxweyne ku xigeenka dowladda Puntland ayaa maanta oo Khamiis ah sheegay in Somaliland aysan cunaqabatayn saari karin gobolka Sanaag. “Arrin aan maqlay oo Muuse Biixi la yiri cunaqabatayn ayuu ku soo rogay [...]